Links များ, ဂျပန်တှငျနထေိုငျဖို့ကိုလမျးညှနျ
MCA ကျောင်းမှနိဒါန်း (ဗီဒီယို)
ဒါဟာ 2014 ခုနှစ်ကအသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
MCA ထိုကဲ့သို့သောပညာသင်နှစ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌ရှိသကဲ့သို့, မည်သည့်အခြေအနေများတွင်ကျောင်းသားများက '' စာကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ကျောင်းမှာနေ့စဉ်လိုအပ်သောဒြပ်စင်သင်ယူခြင်းအားဖြင့်, ကျောင်းသားများဆက်သွယ်ရေး၏နောကျအဆငျ့အတှကျကျွမ်းကျင်မှုကိုနားထောငျနှင့်ဖတ်ရှုခြင်း, ပြောဆိုခြင်း, ရေးသားခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ပါသည်။ ဤသူဝယ်ယူကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး, ကျောင်းသားများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွားများရန်သင့်လျော်အတန်းထဲတွင်ဂျပန်ပိုမိုအဆင့်မြင့် level ကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကျောင်းသားများကိုနားလည်မှုကိုမှသင်ယူဂျပန်များ၏လျှောက်လွှာကိုမှတိုးနဲ့နောက်ဆုံးဇာတိဂျပန်အဖြစ်အတော်လေးကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်နိုင်သည်ကို MCA ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
MCA ကျောင်းသားများစိတ်ဝင်စားစရာ, လွယ်ကူသော-to-နားလည်သောမည်သည့်တစ်ခုတည်းသောအတနျးလက်လွတ်နှင့်လူတိုင်းအသုံးဝင်ဖို့မလိုသည်။
မွန်ပြည်နယ်ကနေ Fri 20hours မှတစ်ပတ်လျှင်
[နံနက်] 9: 00-12: 30 [မွန်းလွဲပိုင်း] 13: 00-16: 30
အထွေထွေအတန်းအစား 800 နာရီ / နှစ်တွင်
သဒ္ဒါ / စာဖတ်ခြင်း / စကားလက်ဆုံ / နားထောင်ခြင်း / အရေးအသား /
ဖွဲ့စည်းမှု / ဝေါဟာရများ / လက်ရှိဖြစ်ရပ်များ
ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု (လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနား / ဂျပန်ကခုန်စတာတွေ)
N1 ၏ဂျပန်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ (JLPT) ဖြတ်သန်း
ဂျပန်တွင်ကောလိပ်, တက္ကသိုလ်, ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းတွင်သို့ဝင်ပေါက်
(လက်တွေ့ကျသောစကားပြော / အရေးအသားစွမ်းရည်အတွက်) ဂျပန် fluency
စုစုပေါင်းအတန်းအစား: 200 နာရီ
ပင်မဖတ်စာအုပ်: Gogaku Ryugakusei မျှမရှိ Nihongo ငါယဉ်
(JLPT n4 အဖြစ်တူညီတဲ့အဆင့်)
မူလတန်း II ကို
စုစုပေါင်းအတန်းအစား: 400 နာရီ
ပင်မဖတ်စာအုပ်: Gogaku Ryugakusei မျှမရှိ Nihongo II ကိုယဉ်
(JLPT N3 အဖြစ်တူညီတဲ့အဆင့်)
အစ / အလယ်အလတ်အလယ်အလတ်ငါ
စုစုပေါင်းအတန်းအစား: 600 နာရီ
ဒီအဆင့်မှာကျောင်းသားကြာကြာစကားပြောဆိုမှုရှိသည်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းချက်ပေးနဲ့နေ့စဉ်ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ကျွမ်းကျင်မှုရရှိပါလိမ့်မည်။
အလယ်အလတ် II ကို
စုစုပေါင်းအတန်းအစား: 800 နာရီ
ပင်မဖတ်စာအုပ်: Cyukyu Kara manabu Nihongo
အလယ်အလတ် III ကို
စုစုပေါင်းအတန်းအစား: 1000 နာရီ
ဒီအဆင့်မှာကျောင်းသားလူမှုရေး / လက်ရှိအမှုအအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်. သူ / သူမ၏ oppinions နားလည်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
(JLPT n2 အဖြစ်တူညီတဲ့အဆင့်)
စုစုပေါင်းအတန်းအစား: 1200 နာရီ
ဒီအဆင့်မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂဂျပန်ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြပြီးလုနီးပါးကလူ dairly စကားပြောဆိုမှုများအတွက်ပြောတဲ့စကားကိုနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်စကားပြောခြင်းရေးသားခြင်း, နားထောင်ခြင်း, စာဖတ်ခြင်း၏ကျွမ်းကျင်မှုရရှိမှုမှာရည်ရွယ်သည်။
(JLPT N1 သို့မဟုတ် n2 အဖြစ်တူညီတဲ့အဆင့်)
စုစုပေါင်းအတန်းအစား: 1400 နာရီ
ပင်မဖတ်စာအုပ်: Jyoukyou က de manabu Nihongo
ဒီအဆင့်မှာကျောင်းသားတစ်ဦးစာစီစာကုံးရေးသားနေတဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်လူမှုရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဂျပန်တစ်ဦးလိမ္မာသောရရှိမှုမှာရည်ရွယ်သည်။
(JLPT N1, EJU ထက်ပိုမို 219 အမှတ်အဖြစ်တူညီတဲ့အဆင့်)
အဆင့်မြင့် II ကို
စုစုပေါင်းအတန်းအစား: 1600 နာရီ
ပင်မဖတ်စာအုပ်: Jyoukyu က de manabu Nihongo
ဒီအဆင့်မှာကျောင်းသားအသံထွက်, အသံသြဇါသို့မဟုတ်ဇာတိစပီကာနှင့်တူသည့်သဘာဝဂျပန်အတွက်အမျိုးမျိုးသော ocassions နှင့်အကြောင်းအရာများကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဂျပန်စကားရပ်၏ဂျပန်ကျွမ်းကျင်မှုရရှိပါလိမ့်မည်။
အဆင့်မြင့် III ကို
စုစုပေါင်းအတန်းအစား: 1800 နာရီ ~
ဒီအဆင့်မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂသူ / သူမဂျပန်အသုံးပြုမှု၏အမျိုးမျိုးသောဘာသာဓလေ့သိစဉ်အများအပြား occations သည်နှင့်အညီဂျပန်ကိုအသုံးပွုဖို့စကားရပ်သို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းကိုရရှိကာလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့တစ်ရရှိမှုအင်အားကြီးဂျပန်ကျွမ်းကျင်မှုမှာရည်ရွယ်ပါလိမ့်မယ်။
MCA ၏အင်္ဂါရပ်များ pre-ကောလိပ်, အထွေထွေသင်တန်းအမှတ်စဉ် ကျောင်းလခ ဖြစ်ရပ်များ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုသွား, စာရင်းအင်းများ ဝန်ခံချက်ပြန်ကြားရေး အဆောင်ပြန်ကြားရေး
ပတ်ဝန်းကျင် တက္ကသိုလ်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်သင်တန်းအမှတ်စဉ် ပညာသင်ဆု သင်ရိုးညွှန်းတမ်း MCA မှအကြံပြုချက်များ ဝန်ခံချက်များအတွက်လျှောက်လွှာများအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ ဘယ်လိုလျှောက်ထားရန်
သမိုင်း ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတွင်အကြိုသင်တန်း အတိတ်လက်ခံ MCA အတန်းအစားသင်ခန်းစာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ နောက်ထပ်လေ့လာတဲ့သူကျောင်းသားဗိုလ်မှူးတက္ကသိုလ်များအရေအတွက် အစိတ်အပိုင်းအချိန်အလုပ်၏ပြန်ကြားရေး
ကျောင်းအုပ်ကြီးထံမှသတင်းစကားကို ရွေးချယ်အတန်း ကွောငြးစာအုပြ နောက်ထပ်လေ့လာတဲ့သူကျောင်းသားများဘွဲ့လွန်ကျောင်းများအရေအတွက် ကျောင်းသားများအသံ
သင်တန်းပို့ချမိတ်ဆက်ခြင်3းလသင်တန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများလှုပ်ရှားမှု EJU များအတွက်ပြင်ဆင်မှုသင်တန်းကို Links များ, ဂျပန်တှငျနထေိုငျဖို့ကိုလမျးညှနျ
အတန်းအစားပြန်လည်ဆုံဆည်း အလုပ်အဖွဲ့အားလပ်ရက်သင်တန်းအမှတ်စဉ် ယဉ်ကျေးမှုအတှေ့အကွုံe ဘွဲ့လွန်ကျောင်းများအကြောင်းကိုမေးခွန်းလွှာများနှင့်အဖြေများ